We.com.mm - ဓာတ်ပုံထဲမှာထက် မှန်ထဲမှာ ဘာလို့ပိုကြည့်ကောင်းနေရတာလဲ
မှန်ထဲကြည့်ပြီး “ငါလေး ချောလိုက်တာဟဲ့” ဆိုပြီး မထင်ဖူးတဲ့သူ မရှိဘူးလို့တော့ ထင်တာပဲ။ အဲလိုမျိုး မှန်ထဲကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ် စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့အချိန် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လို့ ဖရိုဖရဲတွေလည်း ထွက်လာရော ကင်မရာမန်းကို အပြစ်တင်ပါလေရော။ ဓာတ်ပုံနဲ့မှန်ထဲမှာ မြင်တဲ့ပုံနဲ့က တော်တော်လေးကွာနေတာကိုး။ မှတ်ပုံတင်တို့၊ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံတို့ဆို ပိုဆိုးတယ်။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်ပြီး ရှော့တွေတောင်ရတယ်။ “မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါအဲလောက်ကြည့်ရမဆိုးပါဘူး” ဆိုပြီး မှန်ထဲကြည့်ပြန်တော့ အရမ်းတွေ ကြည့်ကောင်းနေပြန်ရော။ So Amazing ပေါ့နော်။ တချို့တွေဆို ပြောသေးတယ်။ “ငါကဓာတ်ပုံမစားတာ။ အပြင်မှာလှတယ်” တဲ့။ အယ်လဲ့။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ပုံကိုယ် ပြန်မြင်ရဖို့ မှန်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပဲ အားကိုးစရာရှိတာမဟုတ်လား။ ဒါဆို ဘယ်သူကလိမ်တာလဲ။ မှန်လား? ကင်မရာလား? ဓာတ်ပုံဆရာလား?
(၁) မှန်ဟာ ပုံရိပ်ပြောင်းပြန်ပေါ်တယ်
ပြောင်းပြန်ဆိုတာ ဇောက်ထိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ညာပြောင်းပြန် (Flip) ဖြစ်တာကို ပြောတာပါ။ လူတိုင်းက မှန်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်အမှန်ပေါ်တယ်လို့ပဲ သဘောထားကြတာလေ။ တကယ်တော့ ဘယ်ညာလွဲနေတဲ့ ပုံရိပ်ကြီးပါ။ ဒါကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြည့်လာတော့ ဒီဘယ်ညာလွဲနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲ အကျင့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာက ဘယ်ဆိုဘယ်၊ ညာဆိုညာ အတည့်အတိုင်းပေါ်တာကိုး။ ပြောင်းပြန်ကြည့်ရာကနေ အတည့်ပြောင်းကြည့်တော့ အမြင်အာရုံထွေပြားသွားတာပါ။ တကယ်တော့ သင်ကသင်ပါပဲ။ ဘယ်ညာလှည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘာကွာလည်း သိချင်ရင် ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကိုယ် ဘယ်ညာလှန်ပြီး ယှဉ်ကြည့်ပါ။
(၂) မှန်ထဲမှာက အနေအထားကို စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်လို့ရတယ်
ဒါကရှင်းပါတယ်။ မှန်ထဲမှာက ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် မြင်နေရတော့ ဘယ်လိုလေး ပြုံးရင်လှမယ်၊ ဘယ်လိုလေးကြည့်ရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်၊ ဘယ်လိုလေးနေရင် ခန္ဓာကိုယ်ပြေပြစ်သလိုထင်ရမယ်ဆိုတာ တန်းသိ၊ တန်းပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျ ကင်မရာထဲက ပုံရိပ်ကိုလှမ်းမြင်ရတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကို့ယို့ကားယားတွေ ထွက်လာတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Potrait ထက် Selfie ရိုက်တဲ့အခါ ပိုလှနေကြတာပေါ့။
(၃) မျက်လုံးနဲ့ကင်မရာ ပုံရိပ်ဖမ်းနိုင်စွမ်းချင်းမတူဘူး
ညဘက် လမင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး အရမ်းလှလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါ ပုံထဲမှာ အမဲထဲက အဖြူရောင် အဝိုင်းသေးသေးလေးပုံစံမျိုးပဲ ထွက်လာတာ ဖြစ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မျက်လုံးနဲ့ ကင်မရာ မြင်နိုင်စွမ်းချင်း မတူပါဘူး။ နောက်ပြီး ဦးနှောက်က မျက်လုံးရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကို ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်လို့ပါ။ ကိုယ့်ပုံကိုယ် မှန်ထဲကြည့်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က မြင်နေကျပုံရိပ်အတိုင်း အလင်းအမှောင်အားလုံး ဖြည့်စွက်ပြီးမှ ပုံရိပ်တစ်ခု ထွက်လာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကျတော့ မတူပါဘူး။ ကင်မရာက သူဖမ်းလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်အတိုင်းထွက်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အလင်းအမှောင်က အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့။
(၄) မျက်နှာက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အချိုးမညီပါဘူး
ဘယ်သူ့မှာမှ ဘယ်ညာအချိုးညီတဲ့ မျက်နှာမရှိပါဘူး။ မယုံရင် ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် သေချာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဘယ်ညာထပ်ကြည့်ပါ။ လူတွေက မှန်ထဲကြည့်ပြီး ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ဘယ်ညာအချိုးညီတယ်လို့ပဲ ထင်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ အချိုးမညီဘဲထွက်လာတဲ့အခါ ကြည့်ရတာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မလှဘူးလို့ ထင်နေကြတာပါ။
(၅) လူတိုင်းက နဂိုရှိတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှတယ်လို့ထင်ကြတယ်
ဒါကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ပါ။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ရှိရင်းစွဲအလှထက် ပိုလှတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်ကြ/ထင်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကင်မရာမှာသုံးတဲ့ effect တွေကြောင့်လည်း ကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုယ် အထင်မှားနေကြတာပါ။ (ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် effect တွေ အရမ်းမသုံးနဲ့လို့ပြောတာပေါ့) အဲလိုအထင်မှားတဲ့ ပုံရိပ်ကိုပဲ ဦးနှောက်ကမှတ်မိပါများလာတော့ မှန်ထဲကြည့်တဲ့အခါလည်း မျက်လုံးက ဖြည့်စွက်မြင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေပဲ ထွက်လာတော့တာပေါ့။
ဘယ်လိုလဲ? သင်ရော မှန်ထဲကပုံရိပ်နဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ မတူဘူးလို့ ခံစားရလား? ဘယ်ပုံကို ပိုကြိုက်လဲ? နှစ်ခုလုံး ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း Good ပေါ့နော်။ ဘယ်သူမှ လှတယ်မပြောလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မှန်ကြည့်ပြီး လှတယ်လို့ထင်နေရတာလည်း စိတ်ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲ မဟုတ်လား။
Photo; Pinterest.com, Brightside
အသက် ၆၄ နှစ်မှာ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဘွဲ့ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်မောင်းသမားကြီး
အိမ်မှာနေတုန်း ဟားဗက်က online class တွေလေ့လာကြမယ်
ငလျင်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်တဲ့ တိရိစ္ဆာန် (၅) မျိုး
အရင်းနှီးဆုံးလူတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ နေ့စဉ်သေဆုံးနေရ